Ahoana ny fomba hisorohana ny famonoan-tena amin'ny fifindra-monina toerana. Martech Zone
Ahoana ny fomba hisorohana ny famonoan-tena amin'ny fifindra-monina
Talata, Jona 5, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Ny fanontanianay voalohany rehefa milaza aminay ny mpanjifa fa hanangana tranokala vaovao izy ireo raha hiova ny hierarkiam-pejy sy ny rafi-pifandraisana. Matetika ny valiny dia eny… ary eo no manomboka ny fahafinaretana. Raha orinasa efa niorina tamina tranokala nandritra ny fotoana fohy ianao dia mety ho hetsika lehibe ny fifindra-monina amin'ny CMS vaovao… saingy ny tsy fanovana ny fifamoivoizana misy dia mitovy amin'ny famonoan-tena SEO.
Tonga eo amin'ny tranokalanao ny fifamoivoizana avy amin'ny valin'ny fikarohana… fa notarihinao ho any amin'ny pejy 404 fotsiny izy ireo. Tonga eo amin'ny tranokalanao ny fifamoivoizana avy amin'ny rohy voazara amin'ny haino aman-jery sosialy… fa notarihinao ho any amin'ny pejy 404 fotsiny ianao Ny isa ara-tsosialy isaina isaky ny URL izao dia mitatitra 0 satria ny fampiharana fanisana ara-tsosialy toa ny tiana amin'ny Facebook, ny bitsika Twitter, ny fizarana LinkedIn, ary ny hafa dia mitahiry ny angona miorina amin'ny URL… izay novainao fotsiny. Mety tsy ho tsapanao akory hoe firy ny olona mandeha mivantana amin'ny pejy 404 satria tranokala maro aza taterina amin'ny analytics izany angona izany.
Ny ratsy indrindra dia ny manampahefana manan-danja mifangaroharo namboarinao isaky ny pejy backlinks atsipy any am-baravarankely izao. Google manome anao roa andro hanamboarana azy… fa rehefa tsy mahita fiovana izy ireo dia alatsany toy ny ovy mafana ianao. Tsy ratsy daholo anefa. Afaka sitrana ianao. Ny sary etsy ambony dia mpanjifanay tena izy izay namoy ny 50% n'ny fivezivezena fikarohana, demo rindrambaiko ary orinasa vaovao farany. Nomena azy ireo a Drafitra fifindra-monina SEO ho an'ireo rohy fa tsy jerena amin'ny famoahana tranokala vaovao ho laharam-pahamehana indrindra.
Niova izany laharam-pahamehana izany.
Ny orinasa dia niditra amin'ny làlan-kaleha an'arivony. Rehefa afaka tapa-bolana dia nanamarika i Google ary namerina azy ireo niverina tany amin'izay nisy azy ireo. Na izany aza dia tsy nisy horohoro sy alina tsy natoriana be nataon'ny ekipa, na izany aza. Ny moraly ao amin'ny tantara eto dia ny fananganana tranokala vaovao miaraka amina rafitra rohy vaovao dia mety ho tetikady mahafinaritra (hiady hevitra indraindray ny bandy SEO fa ho faty) noho ny fiakaran'ny vidim-piainana azonao iainana. Saingy, saingy, saingy… tandremo fa 301 no mamily ny rohy rehetra.
Mbola ho very ny isa ara-tsosialinao. Izahay dia manandrana fomba sasany hanakanana izany tsy hitranga amin'ny toerana itazanantsika rafitra rohy ho an'ny atiny taloha ary avy eo manavao ny rafitra ho an'ny atiny vaovao. Hahafinaritra izany!
Manamora ny fizarana rakitra ny boaty